1 Tantara 6 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 6
Taranak'i Levì - Mpihira notendren'i Davida - Tanàna nonenan'ny Levita.
1Zanakalahin'i Levì: Gersoma, Kaata, ary Merarì. 2Izao no anaran'ny zanakalahin'i Gersoma: Lobonì sy Semeia. 3Zanakalahin'i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. 4Zanakalahin'i Merari: Moholi sy Mosi.
Izao no fianakavian'i Levi isan-drainy avy:
5Avy amin'i Gersoma: Lobnì zanany, Jahata zanany, Zammà zanany, 6Joah zanany, Adao zanany, Zarà zanany, Jetraia zanany. 7Zanakalahin'i Kaata: Aminadaba zanany, Kore zanany, Asira zanany, 8Elkana zanany, Abiasafa zanany, Asira zanany, 9Tahata zanany, Oriela zanany, Oziasa zanany, Saola zanany. 10Zanakalahin'i Elkanà: Amasia sy Akimota; 11Elkanà zanany, Sofaia zanany, Nahata zanany, 12Eliaba zanany, Jerohama zanany, Elkanà zanany. 13Zanakalahin'i Samoela: Vasenì lahimatoa, dia Abia.
14Zanakalahin'i Merarì: Moholì, Lobnì zanany, Semeia zanany, Ozà zanany, 15Sammaà zanany, Haggià zanany, Asaià zanany.
16Ireto no voatendrin'i Davida hitari-kira, tao an-tranon'ny Tompo, niantomboka hatramin'ny nahazoan'ny fiara fitoeram-pijanonana. 17Dia nanao ny raharahan'ny mpihira teo anoloan'ny fonenan'ny tranolay fihaonana izy ireo, mandra-panaovan'i Salomona ny tranon'ny Tompo tany Jerosalema, ary nipetraka nanao ny fanompoany araka ny nandaminana an'izay. 18Dia ireto no nanao ny raharaha, mbamin'ny zanany avy: Amin'ny zanakalahin'ny Kaatita: Hemàna mpihira, zanak'i Joela, zanak'i Samoela, 19zanak'i Elkanà, zanak'i Jerohama, zanak'i Eliela, zanak'i Taoho, 20zanak'i Sofa, zanak'i Elkanà, zanak'i Mahata, 21zanak'i Amasaia, zanak'i Elkanà, zanak'i Joela, zanak'i Azariasa, zanak'i Sofoniasa, 22zanak'i Tahata, zanak'i Asira, zanak'i Abiasafa, 23zanak'i Kore, zanak'Isaara, zanak'i Kaata, zanak'i Levì, zanak'Israely. 24Asafa rahalahiny izay nitsangana teo an-kavanany: Asafa zanak'i Barakiasa, zanak'i Samà, 25zanak'i Mikaela, zanak'i Basaiasa, 26zanak'i Melkiasa, zanak'i Atanaia, zanak'i Zarà, 27zanak'i Adada, zanak'i Etàna, zanak'i Zammà, 28zanak'i Semeia, zanak'i Jeta, zanak'i Gersoma, zanak'i Levì. 29Zanakalahin'i Merarì rahalahin'izy ireo teo an-kavia: Etàna, zanak'i Kosi, zanak'i Abdì, zanak'i Malòka, 30zanak'i Hosabiasa, zanak'i Amasiasa, zanak'i Helkiasa, 31zanak'i Amasaia, zanak'i Boni, zanak'i Somera, 32zanak'i Moholi, zanak'i Mosì, zanak'i Merarì, zanak'i Levì.
33Ny levita rahalahin'izy ireo, dia niandraikitra ny fanompoana rehetra amin'ny tabernakla ao an-tranon'ny Tompo. 34Aarona sy ny zanany anefa no nandoro ny sorona, teo ambonin'ny otelin'ny sorona dorana, sy ny emboka, teo ambonin'ny otelin'ny zava-manitra; izy ireo no tsy maintsy nanantanteraka ny raharaha ao amin'ny fitoerana masina indrindra, sy nanao fanonerana ho an'Israely, araka izay rehetra nandidian'i Moizy, mpanompon'Andriamanitra.
35Ireto no zanakalahin'i Aarona: Eleazara zanany, Finea zanany, Abisoe zanany; 36Boksi zanany, Ozì zanany, Zaraiasa zanany, 37Meraiota zanany, Amariasa zanany, 38Akitoba zanany, Sadaoka zanany, Akimaasa zanany.
39Ary izao no fonenany, araka ny faribohiny, tao amin'ny zara-taniny avy : Ny taranak'i Aarona, amin'ny fianakavian'ny Kaatita, izay voatendrin'ny filokana voalohany, 40dia nomena an'i Hebrona mbamin'ny tany fiandrasam-biby manodidina azy teo amin'ny tanin'i Jodà; 41ny faritanin'ny tanàna kosa anefa mbamin'ny vohiny, dia nomena an'i Kaleba zanak'i Jefone. 42Ny nomena ny taranak'i Aarona ary dia Hebrona tanàna fialofana, 43Lobnò, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy, Jetera, Estemao mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 44Dabira mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Asòna mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Betsemesa mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; 45ny avy amin'ny fokon'i Benjamina kosa, dia Gabea mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Almata mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy. Totalin'ny tanànan'izy ireo, tanàna telo ambin'ny folo araka ny fianakaviany. 46Ny azon'ny taranak'i Kaata sisa, tamin'ny loka, dia tanàna folo, avy amin'ny foko sy ny antsasa-pokon'i Manase. 47Ny tarakan'i Gersoma, araka ny fianakaviany, dia nahazo tanàna telo ambin'ny folo, avy amin'ny fokon'Isakara sy ny fokon'i Asera, ary ny fokon'i Neftalì, sy ny fokon'i Manase, tany Basòna. 48Ny taranak'i Merarì araka ny fianakaviany dia nahazo tamin'ny loka tanàna roa ambin'ny folo, avy amin'ny fokon'i Zabolona. 49Nanome ny tanàna, mbamin'ny tany fiandrasam-biby momba azy, ho an'ny Levita ny zanak'Israely. 50Tamin'ny filokana no nanomezany azy an'ireo tanàna voatendry amin'ny anarany ireo avy amin'ny fokon'ny zanak'i Jodà sy ny fokon'ny zanak'i Simeona, ary ny fokon'ny zanak'i Benjamina.
51Ny sasany amin'ny fianakavian'ny taranak'i Kaata anefa, dia avy amin'ny fokon'i Efraima, ny tanàna azony; 52ka izao no nomena azy ireo : Sikema, tanàna fialofana, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy, teo amin'ny tendrombohitr'i Efraima; Gazera, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; 53Jekmaama, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Betorona, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 54Helona mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Geth-Remmona, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 55ary ny avy amin'ny antsasa-pokon'i Manase, Anera, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Balaama, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy, ho an'ny fianakavian'ny taranak'i Kata sisa.
56Ny nomena ny taranak'i Gersoma avy amin'ny fianakavian'ny antsasa-pokon'i Manase: Gaolona any Basòna, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Astarota mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 57avy amin'ny fokon'Isakara: Kedesa, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Dabereta, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 58Ramota, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Anema, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 59avy amin'ny fokon'i Asera: Masala, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 60Hokòka, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Rohoba, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 61avy amin'ny fokon'i Neftalì: Kedesa, any Galilea, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Hamona, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; ary Kariataima, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy.
62Ny nomena ny Levita sisa taranak'i Merarì : avy amin'ny fokon'i Zabolona: Remmonao, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Tabora, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; 63ny eny an-dafin'i Jordany, tandrifin'i Jerikao, atsinanan'i Jordany: avy amin'ny fokon-dRobena : Bosora any an'efitra, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Jasò, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; 64Kademota, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; Mefaata, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy; 65avy amin'ny fokon'i Gada : Ramota, any Galaada, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Manaima, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; 66Hesebona, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy ; Jezera, mbamin'ny tany fiandrasana biby momba azy. >